XOG:- Xilliga doorashada madaxtiminada oo dib u dhac ku yimid iyo waqtiga kale ee la qaban doonno (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xilliga doorashada madaxtiminada oo dib u dhac ku yimid iyo waqtiga kale ee la qaban doonno (AKHRISO)
Waxaa markii afaraad dib u dhac uu ku yimid xilliga la dooran lahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka, iyadoona maalmaha soo socdo guddiga doorashada dadban ay shaacin doonaan xilliga kama dambeyska ah ee la qaban doonno doorashada.
Xilligii hore loo asteeyay in lagu qabto doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaanay haatan suurto-gal noqon karin maadaama aan weli la dhaarin xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleeyso sarkaal ka tirsan guddiga doorashada dadban ee dalka Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhici doonto 4-ta bisha January, halka tan madaxweynahane ay dhici doonto 24-ka bisha January ee sanadka 2017-ka.
Inkastoo arrinkaan haatan aan si rasmi ah loo shaacin ayaa hadana sarkaalkaasi wuxuu warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in xildhibaanada cusub ee labada Aqal la dhaarin doonno maalinta Arbacada ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 28-ka bishaan December.
Dhinaca kale, madaxda madasha qaran oo dhawaan shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka gaabsatay inay waqti u qabtaan xilliyada doorashada ee madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka, marka laga reebo dhaarinta xildhibaanada labada Aqal.
Ilaa iyo haatan lama oga in markale uu isbadel ku imaan doonno xilliga haatan aynu xaqiijinay inay doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka ku dhici doonaan, waxaana la filayaa in guddiga doorashooyinka dadban ay dhawaan shaaciyaan xilliga kama dambeyska ah ay doorashooyinkaasi dhici doonaan.